Wararka Suuqa Kala Iibsiga Ee Maanta, Declan Rice Oo Asxaabtiisa U Sheegay Ku Biiritaankiisa Man United Iyo Qodobo Kale
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWararka Suuqa kala iibsiga ee maanta, Declan Rice oo Asxaabtiisa u sheegay ku biiritaankiisa Man United iyo Qodobo kale
April 15, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Qeybta Danbe Suuqa kala iibsiga 15 April
Declan Rice ayaa fasaxii ugu dambeeyay ee caalamiga ah la qaatay isaga oo kala hadlaya suurtogalnimada uu ugu biirayo Manchester United saaxiibadiisa reer England ee u ciyaara Red Devils, sida laga soo xigtay Manchester Evening News .
Real Madrid ayaa weli isha ku heysa daafaca dhexe ee Sevilla Jules Kounde oo ka mid ah dhowr daafac oo macquul ah oo ay la soo wareegaan suuqa kala iibsiga, sida ay qortay Marca .
Aston Villa ayaan isku dayi doonin inay si joogto ah ula saxiixato Ross Barkley dhamaadka xilli ciyaareedkaan, sida ay qortay TEAMtalk .
Barcelona ayaa rajeyneysa inay dhameystirto heshiiskii Eric Garcia uu uga soo wareegay Manchester City dhamaadka bisha April, sida ay qortay Sport .
Ole Gunnar Solskjaer ayaa sheegay in Jesse Lingard dib loogu soo dhawayn doono Old Trafford xagaagan laakiin 28 jirkan ayaan wali go’aansan inuu doonayo inuu soo laabto iyo in kale. Goal
Chelsea ayaa baareysa suurtagalnimada heshiis is dhaafsi ah oo ay ku lug leeyihiin Emerson Palmieri iyo Alex Sandro oo ka tirsan Juventus – sida laga soo xigtay Calcio Mercato .
Qeybta Hore ee Suuqa kala iibsiga 15 April
Everton ayaa u aqoonsatay daafaca Norwich Max Aarons inuu yahay bartilmaameedka suuqa kala iibsiga – sida ay qortay The Times .
Moise Kean ayaa qarka u saaran inuu ku laabto Juventus kaliya labo sano ka dib markii uu ka tagay Turin kuna biiray Everton, sida laga soo xigtay Gazzetta dello Sport.
Sergio Aguero ayaa helay dalabkiisii ​​ugu horeeyay ee rasmi ah ka dib markii lagu dhawaaqay inuu ka tagayo Manchester City, iyadoo Juventus ay ku dooneyso heshiis labo sano ah sida laga soo xigtay El Chiringuito.
Mikel Arteta ayaa sheegay in Arsenal ay haatan aad ugu dhowdahay inay heshiis cusub la gasho Folarin Balogun, wuxuuna sharaxaad ka bixiyay qaabkii ka dambeeyay in 19 jirkaan lagu qanciyo inuu sii joogo. Goal
Jerome Boateng ayaan la dhacsaneyn sida ay Bayern Munich u maareysay ka bixitaankiisa kooxda, sida laga soo xigtay SportBild.
Tottenham ayaa qorsheyneysa inay xagaaga la soo wareegto weeraryahanka Stuttgart Sasa Kalajdzic – sida laga soo xigtay Eurosport .
Benfica ayaa u aqoonsatay daafaca bidix ee kooxda Wolves Ruben Vinagre inuu yahay bartilmaameedka suuqa kala iibsiga – sida laga soo xigtay Football Insider .
Kooxda Napoli ayaa ku sii dhawaanaysa saxiixa daafaca kooxda Napoli ee Mattia Zaccagni – sida laga soo xigtay Calcio Mercato .